बाल संगठनबाटै एक बालक १५ वर्षदेखि बेपत्ता, नौ सय बढीको अवस्था अज्ञात ! « Drishti News – Nepalese News Portal
बाल संगठनबाटै एक बालक १५ वर्षदेखि बेपत्ता, नौ सय बढीको अवस्था अज्ञात !
१० बैशाख २०७८, शुक्रबार 7:15 am
काठमाडौं । आफन्तले नेपाल बाल संगठनमा बुझाएका एक बालक १५ वर्षदेखि बेपत्ता छन् । खोजबिनका लागि आफन्तले निरन्तर धाउँदा पनि बालकको अवस्था पत्ता लगाउन सकेका छैनन् ।
ओखलढुंगाको तत्कालीन बर्नालु गाविस– ५ ९हाल सिद्धिचरण नगरपालिका– ५० स्थायी घर भएका पोकलप्रसाद दाहाल बाल संगठनबाटै बेपत्ता भएका हुन् । संगठनले उनलाई एक भारतीयको जिम्मा लगाइएको बताए पनि ती व्यक्तिसँग बालकका आफन्तको सम्पर्क गराउन सकेको छैन ।
संगठनका तत्कालीन कर्मचारीले ०६३ मा पोकलप्रसादलाई भारतको मुम्बई बस्ने धीरजकुमार कोछरको जिम्मा लगाएका थिए । प्रक्रिया नै पूरा नगरी बालक बुझाइएकाले अहिले आफन्तको सम्पर्क हुन नसकेको हो ।
पोकलप्रसादलाई १५ जेठ ०६० सालमा बाल संगठनमा भर्ना गरिएको थियो । बाल संगठन टुहुरा बालबालिकाको संरक्षण र शिक्षा दिने सरकारी निकाय हो । संगठनको १५ जेठ ०६३ को निर्णयअनुसार पोकलप्रसादलाई स्थानीय अभिभावकको रूपमा भारतीय नागरिक कोछरलाई १६ वर्षसम्मका लागि भनेर जिम्मा लगाइएको थियो ।
त्यतिवेला उनी पाँच वर्षका थिए । त्यसरी विदेशीलाई बच्चा दिन मिल्ने प्रावधान नभएकाले बच्चाको बिक्री गरिएको हुन सक्ने आशंका आफन्तले गरेका छन् ।
संगठनका पूर्वकार्यकारी निर्देशक बालकृष्ण डंगोलले दाहाललाई भारतीय नागरिक कोछरलाई बुझाइएको भनेर लिखित पत्र मामा उमाकान्तलाई ०६३ सालमै दिएका थिए । त्यसयता पटक–पटक भान्जा खोज्न संगठनमा आउँदा कहिले परीक्षा भएको भनेर त कहिले अर्को वर्ष नेपाल आउने भनेर आफूलाई झुलाइएको उमाकान्तले बताए ।
‘पढाइ सकेपछि नेपाल आउँछ भनेर पर्खाउने काम भयो, तर अझै पनि कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डंगोलले नै आफूलाई त्यसरी झुक्याएको उनको भनाइ छ । उनले हाल संगठनमा भान्जा उपलब्ध गराइदिन भन्दै निवेदन दिएका छन् ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।